မုံရွေးရွာ၌ သံဃာကြီးငယ်တို့ ဝိသာခါ၏ နို့ကို ယောက္ခမစို့ကြောင်း မစို့ကြောင်း ငြင်းခုံကြရာ၊ မောင်းထောင်ရွာသို့ သတင်းစုံ ရောက်လာ၍ သံဃာတော်များက ရေးသားဆုံးဖြတ်ရန် မေတ္တာရပ်ခံကြသဖြင့် ယင်းအဋ္ဌကထာစကကားကို ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်နှစ်ပါးက မနှစ်သက်ကြောင်း ရေးသားထာ ...
ဒီပဲယင်းမြို့ အနောက်လက်ပေါင်း တောင်ကူရွာတောင်ကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်သည့် ဦးညာဏိန္ဒအား ဒါယိကာမတစ်ယောက်သည် ပဌမပါရာဇိက အာပတ်ဖြင့် စွပ်စွဲသည်။ ဤသည်ကို သံဃာတော် ဝိနည်းများဓိုရ်များဖြင့် ရှင်းလင်းရာ မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်ကို ရေးဖွဲ့ထားသော သံချိုကဗျာ ...
ကောင်းသောအသက်မွေးခြင်းဟု အမည်ပေးခံရသော်လည်း အဓမ္မလောဘဇောနှင့် လက်ကုန်နှိုက်တတ်သော ကုန်သည်လယ်လုပ်များမှာ ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားကွယ်လွန်သောအခါ အပါယ်လေးပါးသို့ လားတတ်ကြောင်းကို သတိပေးကာ ရေးဖွဲ့ထားသည့် သံချိုကဗျာ ဖြစ်သည်။
၁။ အစိန္တေ = မနှိုင်းယှဉ်အပ်သောဘုရား။ ၂။ ဘဂဝါ = ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသောဘုရား။ ၃။ ဗိမ္ပသာ = ဗိမ္မသာရမင်းကြီး။ ၄။ ရှင်ကသိသပါ = မဟာကဿပထေရ်။ ၅။ သာရိပုံ = သာရီပုဏ္ဏေးမ၏သား ရှင်သာရိပုတ္တရာ။ ၆။ သိမံ = သိမ်။ ၇။ ဌာဝယီ = ဌာယီ ပါ၊ တည်သည်၊ တည်လေ့ ...
မောင်းထောင်ရွာမှ ဦးကေသရသည် ဆုံးဆယ်မြို့တွင် ဆရာတော်အဖြစ်သို့ရောက်ပြီးနောက် မောင်းထောင်ရွာမှ ဒါယကာ၊ ဒါယကာမတို့က ပင့်သဖြင့် ကြွတော်မူလာရာ မောင်းထောင်ရွာအနီး ငါးရေဝင်ရွာမှ ရဟန်းလူထွက်ဖြစ်သူ ဦးပြူးက သမောအဌကထာလာ ပါဠိကို ရေးလှူ၏။ ဆရာတော်က ဘာသာပြန်ပေးရမ ...
ကမ္ဘာအစက မဟာသမတမင်းတို့ စိုးစံတော်မူစဉ် စကြဝဠာတံတိုင်း၌ ဓမ္မတာ အစဉ်ရှိသော လောကီဗေဒင်ကျမ်းများကို ရသေ့ ဆယ်ဦးတို့ ကူးယူခဲ့ကြောင်း၊ ဂြိုဟ်လမ်းတို့ မမှန် ဖောက်ပြန်နေကြောင်း၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ်တလုံး ထွန်းလင်းနေကြောင်း စသည်ဖြင့် ဖွဲ့ဆိုထားသော ကြာသပတေးဂြိဟ် ...
မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ လေးမြေရွာဇာတိသား တစ်ယောက်သည် ကာလပျက်သောအခါ ဝင်ဘိုရွာသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သည်။ ဩဇာအာဏာ၊ ဥစ္စာပစ္စည်းကြွယ်ဝသူ ဖြစ်လေသောကြောင့် ရွာသူရွာသားတို့ သူကြီးမြှောက်ကြပြီး သေနတ်နှစ်လက်ကိုင် ရသည်။ ထိုသူကြီးသည် သဒ္ဒါသင်္ဂြိုဟ်တ ...
အချို့သော သူတို့သည် ဒါနသည် သံသရာချဲ့ထွင်ကြောင်းဖြစ်၍ ပရမတ်ကိုသာ ပြုလုပ်ကြိုးစားသင့်ကြောင်း ပြောကြသဖြင့် ထိုသူတို့အား ပညာပေး ဖွဲ့ဆိုလိုက်သည့် သံချိုကဗျာ ဖြစ်သည်။
မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ် ခိုးကျောင်းရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဧသီသည် ရေကန်တူးရာ ကျောက်ဖျာများကို လွှာ၍ လွှာ၍ ယူရပြီး ၎င်းကန်နံဘေးတွင်လည်း အုန်း၊ ထန်း၊ ရှောက်၊ သံပရာ၊ မာလကာ စသော သစ်ပင်များ ဖြစ်ထွန်းနေသည်ကို ဝန်ထောက်က နှစ်သက်ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှုဖ ...
၁၂၆၉ ခု၊ တော်သလင်းလဆန်း ၇ ရက် သောကြာနေ့ ညဉ့် ၁၀ နာရီခန့်အချိန်တွင် ကြောက်ခမန်းလန့်ခမန်း ပျံသန်းသော ဥပါကြီး ထွက်ပေါ်လာသည့်အကြာင်းကို ဖွဲ့ဆိုထားသည့် သံချို ဖြစ်သည်။
မြို့ဝန် ဦးသာအိုးဝ်ငးမှာ စာဆိုကြီးသုံးယောက်အား ဖိနှိပ်၍ ငထွေရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ညောင်ဦးဖီး တို့နှင့်တူကြောင်း၊ ဦးကျော်လှမှာ ကျန်ရစ်သားနှင့် တူကြောင်း စသည်တို့ကို ဖွဲ့ဆိုထားသော သံချိုကဗျာ ဖြစ်သည်။ အသက် ၂၇ နှစ်တွင် ဖွဲ့ဆိုထားသည်။
လီပိုသည် တရုတ်စာပေ လောကတွင် ထင်ရှားသော ကဗျာဆရာကြီးဖြစ်သည်။ သူ့အား လီတိုင်ပိုဟု လည်း ခေါ်ကြသည်။ တန်မင်းဆက်အလယ်ခေတ်တွင် နိုင်ငံတွင်း သာယာတိုးတက်မှုများကို အားပေးချီးမြေ|က်မှုများကြောင့် ထင်ရှားသော မင်းဝှမ် ဘုရင်လက်ထက် ဘုရင့်လက်ရုံးတော် စာဆိုတော်ကြီ ...
သောင်တင်ကျွန်းပေါ်မှ သီချင်းခွေများ သည် ဘီဘီစီရေဒီယီု ၄၏ လူပုဂ္ဂိုလ်ရာဇဝင် နှင့် စစ်မှန်သည့်အဖြစ်အပျက်များအပေါ်မူတည်ကာ ထုတ်လွှင့်သည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၄၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၉မှ စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၊ ဗြိတိန်ရှိ ယနေ့ချိန်အထိ ကာလာအကြာဆု ...
လိဒ်ဂစ်တာ ကို တစ်နည်းအားဖြင့် ဆောလစ်ဂစ်တာ ဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ လိဒ်ဂစ်တာကို လျှပ်စစ်ဂစ်တာ ဟုလည်း လူသိများသည်။ ဂစ်တာအသံချဲစက်နှင့်သာ တီးခတ်ရန် ပုံစံထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် အသံအရည်အသွေးသည် ပစ်ကပ်ပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုမှာ လက်ပေါ ...
လျှပ်စစ်ဂစ်တာ သည် လွန်ခဲ့သော ၈၃-နှစ်ခန့်က စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု ဆိုရမည်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ဂစ်ဘ်ဆန်ဂစ်တာ ကုမ္ပဏီမှ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးဖြစ်သူ Lioyd Loar ဆိုသူက အခြေခံတည်ဆောက်မှုကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဉာဏ်ကွန့်မြူးမှုကြောင့် ကြိုးတပ်တူရိယာပစ္စည် ...
Alternative Metal သည် hard alternative) heavy metal ၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ alternative metal သည် မိခင်အမျိုးအစားဖြစ်သော alternative rock ၏ လွှမ်းမိုးမှုများနှင့် heavy metal ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် metal နှင့် မဆ ...
Celtic Metal သည် folk metal ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအတွင်း အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ ဤအမျိုးအစားသည် heavy metal နှင့် celtic ဂီတတို့ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားကို တီထွင်ခဲ့သည်မှာ အိုင်ယာလန်တီးဝိုင်း Crua ...
Christian Metal ကို White Metal ဟုလည်းသိကြပြီး Heavy Metal ဂီတအမျိုးအစားလည်းဖြစ်သည်။ သီချင်းစာသားများမှာ တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များကို ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ရည်စူးသော စကားလုံးများဖြစ်သည်။ Christian Metal သည်ထုံးစံအတိုင်း ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝ ...
Dark metal သည် heavy metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပုံစံသည် gothic နှင့် extreme metalမှ မှုရင်းဇစ်မြစ်ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာအချို့က dark metalသည် heavy metal ၏ အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း ငြင်းခုံကြသော်လည်း မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းပုံစံ ဆိုလိုရင်းများဖြင့် ...
Death metal သည် heavy metalဂီတ၏ ပြင်းထန်သော မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း ကြီးမားလေးလံသော distorted နှင့် low tuned guitar များကို အသုံးပြုထားပြီး palm muting နှင့် tremolo picking technique များဖြင့် တီးခတ်ထားသည်။ နက်ရှိုင်းသော မာန်ဖီသံ ...
Doom Metal သည် heavy metal ဂီတ၏ပြင်းထန်သော အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ထူးခြားသည့် အရည်အသွေးများစွာဖြင့် နှေးသော tempo များ low-tuned guitar များ အခြားအမျိုးအစားများထက် သိပ်သည်းလေးလံသော ကြီးမားသော ဂီတနှင့်စာသားများသည် စိတ်ပျက်ခြင်း၏အာရုံခံစားမှု၊ ...
Drone metal ကို drone doom နှင့် power ambient ဟုသိကြပြီး heavy metal၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး slow tempo၊ long-duration tone များနှင့် ရောစပ်ထားသည်။ drone metal သည် တစ်ခါတစ်ရံ post-metal နှင့် experimental metal နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။
Extreme metal သည် heavy metal ၏ မျိုးခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းမှ စတင်၍ တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ပေါက်ကွဲကြမ်းတမ်းသော ပုံစံဖြစ်ပြီး thrash metal, black metal, death metal နှင့် doom metal စသော အမျိုးအစားများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ Extr ...
Folk metal သည် heavy metal ဂီတနှင့် tradiontional folk ဂီတတို့ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအတောအတွင်းတွင် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ traditional singing styles လျော့နည်းစေရန် folk instrument များကို ကျယ်ပြန့်စွာ ...
AllMusic သည် alternative တီးဝိုင်းများဖြစ်သော Red Hot Chilli Pepper နှင့် Fishbone တို့သည် metal ထက်ပြင်းထန်သော funk များတီးခတ်စဉ် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များအလယ်တွင် funk metal ပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Faith No More သည် funk metal တီးဝိုင်းဟု ဖော်ပြခ ...
Glam Metal hard rock နှင့် heavy metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ထိုအမျိုးအစားများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် punk rock နှင့် pop ဂီတများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ catchy hooks နှင့် guitar riff များ ပေါင်းထည့်ထားသည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များမှ glam rock ...
Gothic metal သည် heavy metal နှင့် gothic rock တို့၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး dom metal death-doom တို့ လေးလံသိပ်သည်းမှုနှင့် gothic rock ၏ dark atmospheres တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ gothic metal ဂီတသည် ကွဲပြားသော heavy metal ဂီတဆီသို့ gothic မွ ...
Groove metal ကို post-thrash, neo-thrash, power groove သို့ simply groove ဟုခေါ်ပြီး heavy metal ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Pantera နှင့် Exhorder အဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ groove metal သည် thrash metal ၏ ပြင်းပြသော Sonic အရည်အသွေးများကို ယူထားခဲ့ပ ...
Industrial Metal သည် ဂီတအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး industrial dance ဂီတ၊ thrash metal နှင့် hardcore punk ဂီတတို့မှ ဆင်းသက်လာပြီး metal guitar riff များ sampling များ၊ synthesizer distorted vocal များပါဝင်သည်။ Ministry, Godflesh နှင့် KMFDM တို့တွင် ...
Latin Metal သည် လက်တင်ဂီတ နှင့် heavy metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စပိန်ဘာသာဖြင့် အဆိုများ၊ လက်တင်ဂီတဆိုင်ရာ တူရိယာပစ္စည်းများနှင့် Salsa rhythm များနှင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
Medieval Metal သည် folk metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး medieval folk ဂီတနှင့်အတူ heavy metal hard rock ကို ရောစပ်ထားသည်။ medieval metal သည် ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ကန့်သတ်ထားပြီး mittlelalter-metal mittelalter-rock ဟုလည်း သိကြသည်။ အမျိုးအစားသည် ၁၉၉၀ ...
Melodic death metal MDM) သည် heavy metal ဂီတ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး New Wave of British Heavy Metal ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် death metal ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤပုံသည် ဆွီဒင်မှ စတင်ကာ ဖွံ့ဖြိုးပြီး ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် ၁၉၉၀ အစောပိုင်း ...
Melodic Metalcore သည် metalcore ၏ မျိုးခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး melodic death metal မှ စိတ်ကူးညဏ်သစ်ဖြစ်သည်။ guitar riff, blast beat တို့နှင့် ထူးခြားပြီး breakdowns ပုံစံမျိုးဖြစ် သည်။ vocal ကို ဟိန်းဟောက်သံများ၊ စူးရှသံများနှင့် ရှင်းလင်းသည့် သီဆိုပုံမ ...
National Socialist Black Metal သည် black metal ဂီတ၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး National Socialist ကို ထောက်ခံအားပေးသော အနုပညာရှင်များ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ NSBM သည် ထုံးစံအတိုင်း neo-Nazi ယုံကြည်မှု နှင့် Ethnic European Paganism နှင့် နိုင်င ...
Neoclassical metal သည် heavy metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး classical music မှလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ technical playing ဖြင့် ထူးခြားသည်။ classical နှင့် heavy metal ဂီတမှ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ Deep Purple တီးဝိုင်းမှ ဂီတာသမားနှင့် သီချင်းရေးဆရာ ...
Nu Metal သည် alternative metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး heavy metal ဂီတ၏ အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အမျိုးအစားအဆင့်ဆင့်မှာ အထူးသဖြင့် hip hop, funk နှင့် grunge တို့ ဖြစ်သည်။ nu metal နှင့် ဆက်နွယ်သော တီးဝိုင်းများ၌ အမျိုးပြားထွေပ ...
Pagan Metal သည် heavy metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး extreme metal ကို pre-christian ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရောစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြမ်းတမ်းသော melody များ၊ သမားရိုးကျမဟုတ်သော တူရိယာများနှင့် ရှေးကျသော ဘာသာစကားများကို အသုံးပြုထားသည်။ များသောအား ...
Pirate Metal သည် heavy metal၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ဓားပြ ဒဏ္ဍာရီများကို ဂီတအတွင်း ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ စာသားများမှာ မကြာခဏ ပင်လယ်ဓားပြနှင့်ဆိုင်သော ဗန်းစကားများကို အသုံးပြုထားသည်။ အမျိုးမျိုးသော ဂီတအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ thrash, spe ...
Post-metal သည် post-rock, heavy metal နှင့် shoegazing ရောနှောထားခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ post-metal ဟုသော ဝေါဟာရသည် ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ အစောဆုံးတွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ Neurosis နှင့် Godflesh တို့သည် post-metal နဲ့သင့်တော်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖေ ...
Power metal သည် heavy metal ၏မျိုးခွဲဖြစ်ပြီး traditional metal နှင့် speed metal ၏ စရိုက်လက္ခဏာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ power metal သည် Doom metal နှင့် Death metal ပုံစံများကဲ့သို့ သိပ်သည်းကြမ်းတမ်းသာလွန်သော ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ power metal သီခ ...
Rap metal သည် rap rock နှင့် Alternative metal တို့၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဟစ်ဟော့ နှင့် heavy metal တို့၏ vocal နှင့် ပေါင်းစပ်ထားကာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက် မှ thrash metal တီးဝိုင်းဖြစ်သည့် Anrax တီးဝိုင်းသည် hip hop နှင့် heavy metal တို့ ...
Sludge metal သည် ပြင်းထန်သော မျိုးခွဲဂီတဖြစ်ပြီး doom metal နှင့် hardcore punk တို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ sludge metal သည် စူးရှပြီးနှင့် ကြမ်းတမ်းသည်။ မကြာခဏ အော်သံ စူးရှသောအဆို၊ လေးလံသော distorted instruments နှင့် sharply contrasting tempo တို့ဖြင ...
Speed Metal သည် heavy metal ဂီတ၏မျိုးခွဲဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတွင် New Wave of British Heavy Metal မှ စတင်ခဲ့သည်။ Allmusic မှ အလွန်မြန်သော၊ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသော ဂီတဟု ဖော်ပြထားသည်။ thrash metal ထက်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှု လျော့နည်းပြီး melodic သည် har ...
Symphonic black metal သည် black metal ၏ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး symphonic နှင့် orchestral အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ music workstation keyboard များပါဝင်သည်။ woodwind, brass, percussion, keyboard များနှင့် string များအစရှိသော တူရိယာမျို ...
Symphonic metal သည် heavy metal ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သိပ်သည်းသော ဒရမ်၊ ဂီတာနှင့် classical ဂီတ၏အစိတ်အပိုင်းတို့ဖြစ်ပြီး symphonic instrument, choir နှင့် occasion နှင့် full symphony orchestral တို့ပါဝင်သည်။ ဤအမျိုးအစား၏ လူသိများသောတီးဝို ...
Technical death metal progressive death metal) သည် death metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော rhythms, riffများနှင့် သီချင်းပုံစံများ ပါဝင်သည်။ Technical death metal သည် ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ အစောပိုင်းတွင် Death, Atheist နှင့် Cyni ...
Teutonic thrash metal သည် thrash metal ဂီတ၏ အရပ်ဒေသဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀တွင် ဂျာမနီတွင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Bay Area thrash metal, East Coast thrash metal နှင့် Brazillian thrash metalတို့နှင့်တစ်လျှောက် ၁၉၈၀ thrash metal အဓိက ဖြစ်ရပ်မှ တစ ...
Thrash metal သည် heavy metal ၏ပြင်းထန်သောမျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မြန်ဆန်သောအရှိန်နှုန်းနှင့် ကြမ်းတမ်းသောပုံစံများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သီချင်းများသည် မြန်ဆန်သော percussive တီးလုံးများနှင့် နိမ့်သော ဂီတာ riff များ၊ ထပ်ဆင့်ထားသော shredding ပုံစံမ ...
Unblack metal Christian black metal သည် Black metal ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းအနုပညာရှင်များသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အားပေးထားသော စာသားနှင့်နိမိတ်ပုံများဖြင့် သီဆိုလေ့ရှိသည်။ ဩစတြေးလျတီးဝိုင်း Horde တီးဝိုင်း၏ ၁၉၉၄ ခုနှစ် album Helling Usvart တွင် ...
မင်းတို့အိပ်ပျော်နေခဲ့တုန်းက (ကိုရီးယ ..
မြို့ပြမုဆိုး (ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ် ..
ဝိုင်ကီကီမှကြိုဆိုပါ၏ (ကိုရီးယားရုပ်သ ..
ဝေဟင်ထက်က ချစ်ကြယ်စင် (ကိုရီးယားရုပ်သ ..
ဟိုတယ် ဒယ်လူနာ (ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ ..
ဆူးပန်းခွေ သွယ်ဘယက်နှင့် ပေရွက်လိပ် န ..
စီအက်စ်အိုင် - မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေ ..
အခြေခံကျောင်းပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပ ..